အမေရိကန်စတိုင် တရုတ်လေတပ်နှင့် ရုရှားလေယာဉ်များအကြောင်း ( ကော်ပီဆရာ သာကောတို့ အကြောင်း….) – New Of Burmese
အမေရိကန်စတိုင် တရုတ်လေတပ်နှင့် ရုရှားလေယာဉ်များအကြောင်း ( ကော်ပီဆရာ သာကောတို့ အကြောင်း….)တော်တော်များများသိပြီးတဲ့အတိုင်း တရုတ်တို့ရဲ့ Shenyang J-11 ဟာ ရုရှား လေကြောင်းစိုးမိုးရေး တိုက်လေယာဉ် Su-27 နှင့်တူတဲ့အပြင် ဆိုဗီယက်တို့ဆီက ကော်ပီကူးပြီး Shenyang လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးက ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။အစောပိုင်းမှာ တရုတ်တွေက သူ့ရဲ့နယ်စပ်စည်းကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ Su-27 တွေကို မှာယူခဲ့ပြီး စာချုပ်မပြည့်ခင် ရုတ်တရက် စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ် မှုတွေ စတင်ခဲ့ပါတယ်။အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ J-11 များမူလ J-11 များဟာ Su-27 ဒီဇိုင်းမှ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ယခုအခါ တရုတ်လုပ် ပစ္စည်းများကိုသာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနေပါတယ်။ J-11 တွင် J-11BS (နှစ်ယောက်မောင်း တိုက်ခိုက်ရေးပါပြုလုပ်နိုင်သည့် လေ့ကျင့်ရေးမျိုးကွဲ)၊ နှင့် J-11BH (ရေတပ်အောက်ရှိ လေတပ်တွင်အသုံးပြုသော တိုက်လေယာဉ်) စသည်ဖြင့် မျိုးကွဲပေါင်းများစွာရှိပြီး အစင်းရေ ၁၂၀ လောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ အသုံးပြုနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။
J 11J-15 နှင့် J-16အဲဒီ့အပြင် တရုတ်တို့မှာ J-15 နှင့် J-16 ဆိုပြီး ကော်ပီကူးထားတဲ့ နောက်ထပ်လေယာဉ်နှစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်။ ပျံသန်းနေတဲ့ ငါးမန်း Flying Shark လို့ခေါ်တဲ့ J-15 ဟာ ဆိုဗီယက်တို့ရဲ့ Su-33 တွေရဲ့ ဒီဇိုင်းကို ကူးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံစံကတော့ အတောင်ပံတွေကိုခေါက်နိုင်တဲ့ Su-27 နဲ့တူပြီးတော့ landing gear နှင့် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွင် ဆင်းသက်နိုင်ရန် arresting hook ချိတ်ကို တပ်ဆင်ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ တရုတ်တို့ဟာ ရုရှားဆီမှ Su332 ၂ စီးကို ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ဖြင့် ဝယ်ယူဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ရုရှားတို့က ရောင်းချရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားတို့ ရောင်းချလိုစိတ်မရှိသည်ကို သိရသောကြောင့် တပတ်လှည့်အနေဖြင့် ယူကရိန်းထံမှ Su-33 ရှေ့ပြေးပုံစံကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာပဲ ပုံစံတူ J-15 ကို ပထမဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ J-15 ၂ စီးဟာ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော လျောင်နင်ပေါ်သို့ ပထမဆုံး ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။J 15မကြာခင်မှာဘဲ ပျံသန်းနေတဲ့ငါးမန်းလို့ခေါ်တဲ့ လေယာဉ် ၂၄ စီးဟာ တရုတ်လေယာဉ် တင်သင်္ဘောပေါ်မှာ တွေ့ရှိရတော့တာပါပဲ။J-15 ကို FA-18E/F series နှင့် ယှဉ်ဖို့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် လေယာဉ်ဟာကြီးမားပြီး အသုံးပြုထားတဲ့ WS-10A အင်ဂျင်ဟာ ဝန်အပြည့်နှင့် ပျံတက်ရာမှာ လက်နက်အပြည့်အဝ သယ်ဆောင်ဖို့ရာ အခက်အခဲရှိပါတယ်။ဝန်အပြည့်နှင့် J-15 တွေဟာ လက်ရှိ တရုတ်လေယာဉ်တင် သင်္ဘောရဲ့ Ski Jump နဲ့ ပျံတက်နေသရွေ့ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ကို ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အထူး သဖြင့် ဆီလျှော့သယ်ရသဖြင့် စစ်ဆင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး လျှော့နည်းသွားမည့်အပြင်လက်နက် လျှော့သယ်ရသဖြင့် ရန်သူနှင့်ရင်ဆိုင်ရာတွင် တပန်းရှုံးနေပါတယ်။
နောက်တစ်စီးကတော့ အနီရောင်လင်းယုန် Red Eagle လို့ခေါ်တဲ့ J-16 ပါ။ J-16 ကို နှစ်ယောက်မောင်း Su-30MKK2 ကနေ ကိုရွှေတရုတ်တို့က မျိုးစပ်ပေးလိုက်တာပါJ 16တရုတ်တို့ဟာ အဲဒီ့တုန်းကခေတ်ပြိုင် F-15 များကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ မလွှဲမရှောင်သာ ကော်ပီကူးလိုက်ရတာနေမှာပါ။သတင်းများအရ တရုတ်တို့ဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကြားမှာ J-16 ပေါင်း ၇၃ စီးခန့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ရုရှား Su-30MKK2 ကိုတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရေတပ်အတွက် သင်္ဘောတိုက်ဖျက်ရေးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၀ မှာ J-16s ပေါင်း အစီး ၁၀၀ အထိ ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅ မှာတော့ FA-18 Growler အီလက်ထရောနစ်စစ်ပွဲသုံး လေယာဉ်များကို ယှဉ်နိုင်ဖို့ရာ J-16D မျိုးကွဲကို တောင်ပံများမှာ အီလက်ထရောနစ် Jamming pods များတပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
J-15 နှင့် J-16 နှစ်မျိုးလုံးမှာ အဆင့်မြင့် AESA ရေဒါများကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် လေပေါ်တိုက်ပွဲများမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ပစ်မှတ်ပေါင်းများစွာကို တိကျလမ်းညွှန်စနစ်ဖြင့် ပစ်ခတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်တွေမှာ ရန်သူ့ရေဒါမှ ဖမ်းယူနိုင်မှု လျှော့ချပေးနိုင်အောင်လည်း တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ၂၀၁၅ မှာတော့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ အသုံးပြုထားတဲ့ J-11D ရဲ့ ရှေ့ပြးပုံစံကို ထုတ်ပြပြီး စစ်ရေးလေ့လာသူများကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီ J-11D မှာ j-15 နှင့် J-16 လိုပဲ AESA ရေဒါ အပြင် ရန်သူ့ ရေဒါဖမ်းယူနိုင်မှု ကိုလျှော့ချနိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
အမရေိကနျစတိုငျ တရုတျလတေပျနှငျ့ ရုရှားလယောဉျမြားအကွောငျး ( ကျောပီဆရာ သာကောတို့ အကွောငျး….)တျောတျောမြားမြားသိပွီးတဲ့အတိုငျး တရုတျတို့ရဲ့ Shenyang J-11 ဟာ ရုရှား လကွေောငျးစိုးမိုးရေး တိုကျလယောဉျ Su-27 နှငျ့တူတဲ့အပွငျ ဆိုဗီယကျတို့ဆီက ကျောပီကူးပွီး Shenyang လယောဉျထုတျလုပျရေးက ထုတျလုပျထားတာပါ။အစောပိုငျးမှာ တရုတျတှကေ သူ့ရဲ့နယျစပျစညျးကို ကာကှယျဖို့ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ Su-27 တှကေို မှာယူခဲ့ပွီး စာခြုပျမပွညျ့ခငျ ရုတျတရကျ စာခြုပျကို ဖကျြသိမျးပွီး ကိုယျတိုငျ ထုတျလုပျ မှုတှေ စတငျခဲ့ပါတယျ။အဆငျ့မွှငျ့တငျထားတဲ့ J-11 မြားမူလ J-11 မြားဟာ Su-27 ဒီဇိုငျးမှ ထုတျလုပျခဲ့ပမေယျ့ ယခုအခါ တရုတျလုပျ ပစ်စညျးမြားကိုသာ တပျဆငျအသုံးပွုနပေါတယျ။ J-11 တှငျ J-11BS (နှဈယောကျမောငျး တိုကျခိုကျရေးပါပွုလုပျနိုငျသညျ့ လကေ့ငျြ့ရေးမြိုးကှဲ)၊ နှငျ့ J-11BH (ရတေပျအောကျရှိ လတေပျတှငျအသုံးပွုသော တိုကျလယောဉျ) စသညျဖွငျ့ မြိုးကှဲပေါငျးမြားစှာရှိပွီး အစငျးရေ ၁၂၀ လောကျ ၂၀၁၅ ခုနှဈအထိ အသုံးပွုနတေုနျးဖွဈပါတယျ။
J 11J-15 နှငျ့ J-16အဲဒီ့အပွငျ တရုတျတို့မှာ J-15 နှငျ့ J-16 ဆိုပွီး ကျောပီကူးထားတဲ့ နောကျထပျလယောဉျနှဈမြိုးရှိပါသေးတယျ။ ပြံသနျးနတေဲ့ ငါးမနျး Flying Shark လို့ချေါတဲ့ J-15 ဟာ ဆိုဗီယကျတို့ရဲ့ Su-33 တှရေဲ့ ဒီဇိုငျးကို ကူးယူထားတာဖွဈပါတယျ။ပုံစံကတော့ အတောငျပံတှကေိုခေါကျနိုငျတဲ့ Su-27 နဲ့တူပွီးတော့ landing gear နှငျ့ လယောဉျတငျသင်ျဘောတှငျ ဆငျးသကျနိုငျရနျ arresting hook ခြိတျကို တပျဆငျပွီး အဆငျ့မွှငျ့တငျထားပါတယျ။၂၀၀၆ ခုနှဈမှာ တရုတျတို့ဟာ ရုရှားဆီမှ Su332 ၂ စီးကို ဒျေါလာ သနျး ၁၀၀ ဖွငျ့ ဝယျယူဖို့ ကွိုးစားပမေယျ့ ရုရှားတို့က ရောငျးခရြနျ ငွငျးဆနျခဲ့ပါတယျ။
ရုရှားတို့ ရောငျးခလြိုစိတျမရှိသညျကို သိရသောကွောငျ့ တပတျလှညျ့အနဖွေငျ့ ယူကရိနျးထံမှ Su-33 ရှပွေ့ေးပုံစံကို ဝယျယူခဲ့ပွီးနောကျ ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာပဲ ပုံစံတူ J-15 ကို ပထမဆုံးထုတျလုပျနိုငျခဲ့ပွီး ၂၀၁၂ ခုနှဈမှာ J-15 ၂ စီးဟာ လယောဉျတငျသင်ျဘော လြောငျနငျပျေါသို့ ပထမဆုံး ဆငျးသကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။J 15မကွာခငျမှာဘဲ ပြံသနျးနတေဲ့ငါးမနျးလို့ချေါတဲ့ လယောဉျ ၂၄ စီးဟာ တရုတျလယောဉျ တငျသင်ျဘောပျေါမှာ တှရှေိ့ရတော့တာပါပဲ။J-15 ကို FA-18E/F series နှငျ့ ယှဉျဖို့ထုတျလုပျခဲ့ပမေယျ့ လယောဉျဟာကွီးမားပွီး အသုံးပွုထားတဲ့ WS-10A အငျဂငျြဟာ ဝနျအပွညျ့နှငျ့ ပြံတကျရာမှာ လကျနကျအပွညျ့အဝ သယျဆောငျဖို့ရာ အခကျအခဲရှိပါတယျ။ဝနျအပွညျ့နှငျ့ J-15 တှဟော လကျရှိ တရုတျလယောဉျတငျ သင်ျဘောရဲ့ Ski Jump နဲ့ ပြံတကျနသေရှေ့ သူ့ရဲ့စှမျးဆောငျရညျအပွညျ့ကို ရရှိနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။အထူး သဖွငျ့ ဆီလြှော့သယျရသဖွငျ့ စဈဆငျနိုငျသညျ့ အကှာအဝေး လြှော့နညျးသှားမညျ့အပွငျလကျနကျ လြှော့သယျရသဖွငျ့ ရနျသူနှငျ့ရငျဆိုငျရာတှငျ တပနျးရှုံးနပေါတယျ။
နောကျတဈစီးကတော့ အနီရောငျလငျးယုနျ Red Eagle လို့ချေါတဲ့ J-16 ပါ။ J-16 ကို နှဈယောကျမောငျး Su-30MKK2 ကနေ ကိုရှတေရုတျတို့က မြိုးစပျပေးလိုကျတာပါJ 16တရုတျတို့ဟာ အဲဒီ့တုနျးကခတျေပွိုငျ F-15 မြားကို ယှဉျပွိုငျဖို့ မလှဲမရှောငျသာ ကျောပီကူးလိုကျရတာနမှောပါ။သတငျးမြားအရ တရုတျတို့ဟာ ၂၀၀၀ ခုနှဈနှငျ့ ၂၀၀၃ ခုနှဈကွားမှာ J-16 ပေါငျး ၇၃ စီးခနျ့ထုတျလုပျခဲ့ပွီး ဝယျယူအသုံးပွုခဲ့တဲ့ ရုရှား Su-30MKK2 ကိုတော့ ၂၀၀၄ ခုနှဈမှာ အဆငျ့မွှငျ့တငျမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ပွီး ရတေပျအတှကျ သင်ျဘောတိုကျဖကျြရေးတာဝနျမြားကို ထမျးဆောငျစခေဲ့ပါတယျ။၂၀၂၀ မှာ J-16s ပေါငျး အစီး ၁၀၀ အထိ ထုတျလုပျသှားမယျလို့သိရပါတယျ။ဒီဇငျဘာ ၂၀၁၅ မှာတော့ FA-18 Growler အီလကျထရောနဈစဈပှဲသုံး လယောဉျမြားကို ယှဉျနိုငျဖို့ရာ J-16D မြိုးကှဲကို တောငျပံမြားမှာ အီလကျထရောနဈ Jamming pods မြားတပျဆငျခဲ့ပါတယျ။
J-15 နှငျ့ J-16 နှဈမြိုးလုံးမှာ အဆငျ့မွငျ့ AESA ရဒေါမြားကို တပျဆငျထားတဲ့အတှကျ လပေျေါတိုကျပှဲမြားမှာ ပိုမိုကောငျးမှနျစပွေီး ပဈမှတျပေါငျးမြားစှာကို တိကလြမျးညှနျစနဈဖွငျ့ ပဈခတျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ဒီလယောဉျတှမှော ရနျသူ့ရဒေါမှ ဖမျးယူနိုငျမှု လြှော့ခပြေးနိုငျအောငျလညျး တညျဆောကျထားပါတယျ။ ၂၀၁၅ မှာတော့ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာမြား အသုံးပွုထားတဲ့ J-11D ရဲ့ ရှပွေ့းပုံစံကို ထုတျပွပွီး စဈရေးလလေ့ာသူမြားကို အံ့အားသငျ့စခေဲ့ပါတယျ။ဒီ J-11D မှာ j-15 နှငျ့ J-16 လိုပဲ AESA ရဒေါ အပွငျ ရနျသူ့ ရဒေါဖမျးယူနိုငျမှု ကိုလြှော့ခနြိုငျအောငျ တညျဆောကျထားပါတယျ။
Previous Article ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ထံ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူနိုင်ရန် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၆၀၀၀ကျော် လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်
Next Article ထိုင်ဝမ်လေကြောင်းပိုင်နက်ထဲသို့ ဒုတိယနေ့မြောက်အဖြစ် တရုတ်ပြည်မကြီးလေယာဉ်အုပ်လိုက်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပွား။